Imveliso-i-Shanghai Mingke Process Systems Co., Ltd.
Uhlobo lweSistim zokuKhangela ngebhanti yentsimbi
I-Mingke inokubonelela ngeentlobo ezine zeenkqubo zokulandelela ibhanti yentsimbi kumashishini ahlukeneyo.
iStainless Steel Belt Conveyor
Ngaphandle kwamabhanti entsimbi, iMingke ibonelela ngeConveyor yeSimbi eStainless Steel.I-Steel Belt Conveyor eyenziwe nguMingke exhotyiswe ngeMingke Products.Njengebhanti yentsimbi ephezulu, inkqubo yokulandela ibhanti yentsimbi, iintambo zerabha ze-v.
I-Static ye-Isobaric ye-Belt Press
Ngo-2016, uMingke waphuhlisa ngempumelelo i-Static Isobaric Double Belt Press yokuqala (i-DBP), kwaye ngo-2020 ubushushu bokufudumala bokushicilela buphakanyiswe kwi-400 ℃.
Siziingcali ekuveliseni nasekuboneleleni amabhanti entsimbi anamandla aphezulu kunye neenkqubo zebhanti.
MT1650 Martensitic Ibhanti yentsimbi engatyiwayo
I-MT1650 yibhanti yentsimbi esezantsi yekhabhoni eqinileyo ye-martensitic, enokuthi iphathwe ubushushu ukuphucula amandla kunye nobulukhuni.Inokuqhutyelwa phambili kwibhanti ye-supper-mirror-polished kunye nebhanti ye-textured.
MT1500 Martensitic Ibhanti yentsimbi engenanto
I-MT1500 yibhanti yentsimbi ye-martensitic ephantsi ye-carbon precipitation-hardening steel stainless steel, enokuthi iphathwe ubushushu ukuphucula amandla kunye nobulukhuni.
IBhanti yentsimbi echanekileyo yoShishino oluPhezulu
Ibhanti echanekileyo, njengeemveliso eziphezulu phakathi kwazo zonke iibhendi zentsimbi, zineenzuzo kumandla abalaseleyo, ukuchaneka okuphezulu kunye nococeko lomhlaba.
Inkonzo yokuLungisa iBhanti yentsimbi
Kwishishini lepaneli esekwe ngamaplanga, ishishini leMichiza, ishishini lokutya kunye nolunye ushishino, iibhanti zentsimbi zonakaliswe emva kokusebenza ngokuqhubekayo iminyaka emininzi kwaye zichaphazele imveliso eqhelekileyo kwaye kufuneka zitshintshwe.